Iindawo ezilungileyo zokutyelela e-UK- ALinks
I-United Kingdom yenye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi eYurophu. I-United Kingdom iquka iNgilani, iSkotlani, iWales, kunye neNorthern Ireland. Zininzi iindawo ezinomdla zokukhangela e-Uk. Ukusuka kwiyantlukwano yenkcubeko ukuya kwiindawo eziluma umlomo, iilwandle ezingenabantu, iindawo zenkcubeko. ILondon, ikomkhulu laseNgilani, yeyona ndawo inomtsalane e-UK njengoko inezona ndawo zigqwesileyo. Ngaphandle koko, i-UK inezinye zezona ndawo zibalaseleyo zobugcisa kunye nezinye iimyuziyam zakudala zehlabathi.
Ukuba neholide yase-UK yinto emnandi kuwe. Uya kufumana ukuphonononga iqela lonke lezinto. Umntu uya kufumana ulonwabo olukhulu ekuphononongeni ubutyebi belifa lenkcubeko. Uthutho phakathi kwezixeko lulungile kwaye lukunceda ekujongeni iindawo ezininzi. Uloliwe okanye uhambo olufutshane lwebhasi konke okufunekayo ukutyelela iindawo ezahlukeneyo. Ungandwendwela izixeko zaseScotland njengeGlasgow, Edinburgh, kunye nezinye ezininzi ekuhambeni. I-UK izele iindawo ezininzi ezinomtsalane ukuba kutsala abakhenkethi abavela kwihlabathi liphela.
Nantsi inkcazo emfutshane yeendawo eziphambili ekufuneka uzityelele kuhambo lwakho lokuya UK. Unokuqokelela ulwazi ngakumbi malunga nokhenketho lwe-Uk Apha.
Inqaba yewotshi yeBig Ben
ILondon sisixeko esilikomkhulu laseNgilani nase-United Kingdom. Kuthiwa uhambo oluya e-UK alugqitywanga ukuba awuyanga eLondon. Yindawo yokumisa kubakhenkethi kwindawo yokumisa iiholide zakho e-UK. Isixeko sigcine inkcubeko yaso kunye nembali eyahlukeneyo ukubuyela kumaxesha amaRoma. Kukho iindawo ezahlukeneyo ekufuneka uzindwendwele ukuba useLondon. Njengokujonga nje ivili laseLondon elikhulu kunxweme lomlambo iThames kuyonwabisa emehlweni akho. Ibhotwe laseWestminster ngumzekelo wokwenene welifa elilondoloziweyo lenkcubeko. Ibhotwe linika umbono owoyikekayo wepanoramic kunye nenqaba yayo yewotshi yeBig Ben. Ukuzulazula ezitalatweni zaseLondon kuya kukufumanela elona xesha limangalisayo lokuchitha kweso sixeko.
Ukuba ezi zinto azikhange zikutsalele ukuba utyelele, ke iBuckingham Palace ngokuqinisekileyo iya kuyenza loo nto. IBuckingham Palace likhaya losapho lwaseBritane ukusukela ngexesha lolawulo lukaKumkanikazi uVictoria. Zininzi izinto onokuzihlola kutyelelo lwakho lweBuckingham Palace. Kodwa, qiniseka ukubhukisha utyelelo lwakho kwangaphambili njengoko ibhotwe livula iiveki ezimbalwa ngonyaka.
Iliso laseLondon -Ivili leFerris
Iliso laseLondon lelona vili lidumileyo likaFerris emhlabeni. Yenzelwe ukuphawula imibhiyozo yeminyaka eliwaka yaseLondon ngo-2000 kwaye yayiyeyona nto inomtsalane eLondon ukusukela kusuku lokuqala. Iicapsules zegilasi ezinyukayo zenyuka zaya kwi-443 ft ngaphezulu kweThames, zinegalelo kwezinye zeembono ezintle zesixeko. Ukukhwela konke kuthatha malunga nemizuzu engama-30 kwaye kulandelwa ngokubanzi ngumgca omde. Nangona kunjalo, ukuba umntu ungxamile ngeLiso laseLondon: Tsiba-itikiti, baya kuyifumana phambi kwabanye.
Edinburgh: Idolophu yaseScotland
I-Edinburgh idolophu elikomkhulu laseScotland, kwaye sesinye sezona zixeko zityelelweyo e-UK. Idolophu elikomkhulu liziko lenkcubeko kunye nezobugcisa ezaziwa kakhulu kwiminyhadala yalo. Esi sixeko sineNqaba entle yase-Edinburgh ebekwe entabeni, enye yezona ndawo zibalaseleyo ukutyelela e-UK. Le nqaba ikunika imbono ebambekayo nenobuqaqawuli bendalo. Zininzi ezinye iisayithi ezibalulekileyo zembali esixekweni onokuzihlola. Hamba uye kwiRoyal Mile ukusuka kwinqaba uye kwi-Holyroodhouse uyimfuneko enkulu. Ngaphandle kweendawo zembali, i-Edinburgh idume nge-whisky yayo. I-Edinburgh ineyona mivalo mihle inee-whiskeys ezintle kwihlabathi.
ICanterbury sisixeko secathedral kumazantsi mpuma eNgilane. Isixeko sinokufikeleleka ngokulula ngololiwe kangangeyure ukusuka kwisikhululo saseCentral London. Isixeko sasikwindawo yokundwendwela kwiminyaka ephakathi phantse iminyaka eyi-1500. Eyona dolophu idumileyo yabakhenkethi eCanterbury yiCanterbury Cathedral, ebekwe eKent. ICathedral yaseCanterbury likhaya lika-Archbishop waseCanterbury. Ikwamkelwe njengendawo yelifa lemveli le-UNESCO. Zininzi izinto onokuzibona, njengobunjani bayo obuhle obuyilwe ngaphakathi.
Ngaphandle kweendawo zelifa lemveli, unokuchitha ixesha lakho uphonononga indawo yabahambi ngeenyawo yesixeko esidala. Isixeko esidala saseCanterbury sinezinye zezakhiwo ezigcinwe kakuhle. Ezi zakhiwo zenziwe ngamaplanga ezenziwe kumgaqo weMercery. Imyuziyam yaseCanterbury yaseRoma yindawo entle yokutyelela kunye nokuphonononga. Eyakhelwe ngeenxa zonke kumabhodlo endlu yaseRoma anemifanekiso yayo eyahlukileyo. Le ndawo inomtsalane kubakhenkethi abaninzi.
ICardiff sisixeko esilikomkhulu laseWales, esikwabizwa ngokuba sisiXeko seArcades. Ukuba sesinye sezona zixeko zikhulu zincinci eYurophu, isixeko sitsala abakhenkethi abaninzi. Ikwayenye yezona ndawo zibalaseleyo zase-UK ukutyelela ngexesha lotyelelo lwase-UK. Uya kuphonononga iihambo zangaphandle epakini yesizwe yaseCardiff. Kukho iipaki ezilishumi elinanye zelizwe eCardiff, ezinika amava okuluma ngomlomo. Isixeko sineendawo zembali zokubonisa inkcubeko yabo.
ICardiff castle yenye yezona ndawo zityelelwe kakhulu esixekweni. Inqaba yayakhiwe kwinqaba yakudala yaseRoma kwaye ibekwe embindini wesixeko. Ezinye izinto eziqaqambisa umdla wabakhenkethi esixekweni yiClock Tower, iChapel, nezinye ezininzi. Ukugcina izinto zembali ecaleni, isixeko sinezinye izinto ezininzi. Inezona ndawo zinkulu zokuthenga ngaphakathi ngaphakathi kwiBritane yonke. Isixeko sisekhaya kwimiboniso emininzi yobugcisa, iithiyetha, iivenkile zokutyela, ii kunye nezinye ezininzi.
ICardiff Bay ikwanayo nengqokelela ekhethekileyo yeenqanawa ezivela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Ukuba ungumthandi wolwandle, ilizwe leenqanawa liya kukumangaza ngezinto ezininzi ezahlukeneyo.
Ndwendwela ifayile ye- indawo yokuhlala e-UK.
Iindawo zokundwendwela eLondonIindawo zabakhenkethi
Zeziphi izixhobo zeKhitshi endizifunayo?
Eyona intonga yeselfie ye-iphone uk
Jonga ezona ndawo zintle undwendwele eUnited States
Iziqhano zezikhonkwane ezikhuselekileyo uk
Eyona fowuni zibalaseleyo e-uk
Izibane ezigqibeleleyo zokufunda zingaphantsi kwe-1000